Posted on October 1, 2011 by Babukrishna
श्रावण महिनाको देशको आर्थिक स्थिति
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा चालू खाता ७३ करोड रुपियाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता २ अर्ब ४२ करोड रुपियाँले घाटामा रहेको थियो । खासगरी व्यापार एवं सेवा खातामा भएको सुधारका साथै विप्रेषण आप्रवाहमा भएको उल्लेखनीय वृद्धिका कारण चालू खाता बचतमा रहन गई समग्रमा शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहन गएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को पहिलो महिनामा सरकारी बजेट १० अर्व ९३ करोडले बचतमा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा सरकारी खर्चको तुलनामा राजस्व परिचालन उच्च रहेकोले सरकारी बजेट बचतमा रहेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारी बजेट ४ अर्व ९७ करोडले बचतमा रहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को पहिलो महिनामा कुल वस्तु निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १७.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ६ अर्ब ७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल वस्तु निर्यात १६.९ प्रतिशतले घटी रू. ५ अर्ब १५ करोडमा सीमित भएको थियो । साउन महिनामा निर्यात–आयात अनुपात १८ दशमलब ६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात १६ दशमलब ९ प्रतिशत रहेको थियो ।
« बैंकले प्रज्ञापनपत्र नक्कली र सक्कली हो भन्ने जाँचेर बस्दैन पेट्रोलियम पदार्थको भाउ पुनः बढ्यो »